I-Chrome: Ukuzijabulisa okuningi ngezinjini zokusesha | Martech Zone
I-Chrome: Ukuzijabulisa okuningi ngezinjini zokusesha
NgoMgqibelo, Disemba 12, 2009 NgoLwesithathu, Juni 7, 2017 Douglas Karr
Into eyodwa engihlala ngithanda ukuhlangana nayo yinjini yokusesha ezenzakalelayo noma uhlu lwezinjini - noma ngabe yiFirefox noma safari. Ngicwaninga isiza sami kaningi ngokwanele ukuthi ngivame ukungeza lokho ohlwini. Ngaphezu kwalokho, kumnandi njalo ukwenza izinto ezinjengokwenza iBing ibe yinjini yakho yokusesha ezenzakalelayo ku-Chrome ukugcina izilo zilwa (I ngempela uthanda iBing!).
Ngize ngazakhela eyami Faka ifomu le-Injini Yokucinga yeFirefox ukwenza izinto zibe lula. I-Chrome ayilula kangako, ayisebenzisi isakhi se-AddEngine esenziwa yiFirefox ngakho ngeke umane wakhe isixhumanisi. Futhi, akukho ukwehla kokukhetha injini yokusesha.
Kodwa-ke, kunesici esisodwa esihle nge-omnibar… ungangeza igama elingukhiye olikhethayo ukwengeza injini yokusesha. Nakhu ukuthi ungayengeza kanjani injini yokusesha:
Noma iya kokuncamelayo kwe-Chrome bese uqhafaza ukuphatha kuma-Search Engines noma chofoza kwesokudla ku-Omnibar bese ukhetha Hlela Izinjini Zokucinga.
Faka igama lenjini yokusesha noma isiza ongathanda ukusisesha, igama elingukhiye ukulihlukanisa kalula, ne-URL yenjini yokusesha ene-% s njengegama lokusesha. Nasi isibonelo ngeChaCha:
Manje, sengingavele ngithayiphe i- “ChaCha” futhi umbuzo wami bese i-Chrome izofaka i-URL ngokuzenzekelayo bese iyithumela. Lokhu empeleni kulula kakhulu kunokushaya okwehlayo nokukhetha injini yokusesha. Nginegama ngalinye lezinjini zami zokusesha elinamagama angukhiye… i-Google, i-Bing, i-Yahoo, i-ChaCha, i-Blog… futhi ngisebenzisa i-omnibar ukuthola imiphumela ngokushesha! Uma usuqale ukuthayipha, i-Chrome iqedela ngokuzenzakalela futhi inikeze imininingwane yokusesha:
Ungakwazi ngisho buyekeza Isimo sakho se-Twitter usebenzisa i-omnibar ngoba i-Twitter inendlela yokubuza ukufaka i-Tweet. Noma ungangeza isinqamuleli segama elingukhiye ukusesha nge-twitter http://search.twitter.com/search?q=%s.
Ukudalula: ChaCha yikhasimende lami. Banemiphumela emihle, noma kunjalo… ikakhulukazi uma ufuna okuthile okulula njengekheli, inombolo yocingo, umbuzo we-trivia, noma okungcono kakhulu… amahlaya. Banamakhasi aqinile ngokumangalisayo kosaziwayo nezihloko, futhi.
Tags: isipheqululichromei-Google Chrome